भाषा परिक्षा पास गरेपनि, किन कोरिया जानपाउँदैनन् परिक्षार्थी ? - Shiksha Sansar
भाषा परिक्षा पास गरेपनि, किन कोरिया जानपाउँदैनन् परिक्षार्थी ?
काठमाडौं । ‘वर्षौंसम्म कोरियाली भाषा रटेँ, परीक्षा दिएँ, पास पनि भएँ। तर, कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको,’ सुर्खेतका जनक भण्डारीले गुनासो पोखे ।
किन कोरिया जान पाउँदैनन् युवारु
भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि पनि कोरिया रोजगारीका लागि जान रोजगारदाताको रोजाइमा पर्नुपर्ने हुन्छ। कोरियाले कामदारको उमेर, लिङ्ग र राष्ट्रियताका आधारमा विदेशी कामदार छनोट गर्ने प्रवक्ता शोभाकरण भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘रोजगारदाताले कुन देशको कामदार, कति उमेरभित्रको महिला वा पुरुष भनेर एउटा रोष्टर तयार पार्छ, रोजगारदाताको रोष्टर अनुसारका कामदार कोरिया सरकारले आपूर्ति गर्ने हुँदा भाषा पास गर्ने सबै कोरिया जान पाउँदैनन्,’ भण्डारीले भने नेपाल लाइभबाट साभार